Nyocha Blog: Dave Woodson, Social Media ndụmọdụ | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 14, 2010 Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Douglas Karr
Dave Woodson kwuru bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-enyere ndị ahịa aka na ọnụnọ ha n'ịntanetị. Dave mere nlezianya banyere ịde blọgụ akwụkwọ anyị dere ma tinye ya na Barnes na Noble. Dị ka ekwere na nkwa, anyị na-enyocha nyocha nke blọọgụ ya iji nye ụfọdụ nzaghachi dị mma iji mezie ya! Nke a na-aga:
Ọ bụghị ozugbo ahụ ihe nzube nke blog gị bu onye obia. Aghaghị m ịga Ebe ọ bụla iji nwee mmetụta maka ihe ị na-ede blọgụ banyere ya. Aga m akwado itinye akara ngosi ma ọ bụ ihe edetu na akụkụ aka nri nke na-akọwa nzube nke blọgụ gị.
Ebe ọ bụ na ị na-enyere ndị azụmaahịa aka na mgbasa ozi mmekọrịta na teknụzụ, aga m akwado nnukwu akpọ-na-eme (CTA) n'elu aka nri nke sidebar gị na ibe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ mara na ị dị maka ụgwọ. Na CTA kwesiri ibughari mmadu na a ọdịda peeji nke nwere ma kọntaktị ụdị na ụfọdụ ozi ndị ọzọ na ndị ahịa na ọrụ ị na-enye.
Nwere nnukwu nkụnye eji isi mee na logo… were logo na melite akara ngosi maka blog gị. Nke a bụ post na -esi mee favicon.
your robots.txt faịlụ ahụ dị na mgbọrọgwụ nke ngalaba gị ma nwee ebe saịtịmap.xml edepụtara - nke ahụ dị egwu! M ga-dezie faịlụ na disallow okporo ụzọ ọ bụla / wp- * ndekọ ma ọ bụ faịlụ - nke a ga-akwụsị search engines si indexing gị ndutịm ndekọ.
URLzọ URL gị (permalink) dị egwu - ọ dị ka enwere ọnụọgụ nọmba. Echeghị m na nke ahụ na-ewute gị, mana ọ dị ntakịrị. Ebe ọ bụ na ị naghị ogo elu na nsonaazụ ọchụchọ ọ bụla (m na-eji Semrush inyochaa), M nwere ike dọpụta ya, ọ na-ese a bit spammy. Nwere ike iji htaccess iwu ịgbanwe permalink. My ọkacha mmasị bụ /% postname% /. Ọdịdị URL enweghị mmetụta dị ukwuu dị ka ọ dị na mbụ, mana onye ma mgbe ọ ga-alaghachi!
Nhazi usoro ntaneti gi di egwu - o doro anya ma di mfe ihu ihe nile. Ọ masịrị m Ogwe ogwe aka gị gafee elu, ọ na-egbutu ngwa ngwa na ibe ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere nnukwu ihe foto nke gị n'isi. Ndị mmadụ kwesịrị ịma onye Dave bụ - na nnukwu foto ga-eweta mmetụ onwe onye ahụ nke ga-ewulite ntụkwasị obi ma mee ka ndị mmadụ mara gị na blọọgụ gị. Enwere m foto m ebe niile, ọbụlagodi na nke m kaadị azụmahịa. Mgbe mmadụ nara kaadị m izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ha ga-echeta onye m bụ. Anaghị m eme ya naanị n'ihi na echere m na m mara mma;).
Edere ederede gị nke ọma oke ohere n'etiti paragraf na ojiji nke ndepụta. Ndepụta dị irè mgbe ị na-ede ebe ọ bụ na ndị mmadụ nwere ike i scanomi ha ngwa ngwa. M ga - agba gị ume ka ị mụbaa obere mpempe akwụkwọ gị ntakịrị ma jiri okwu obi ike na italic na isiokwu ịchọrọ iji ọdịnaya gị laa.
“Social Media & Tech” bá »a nná» á »pá» very rá »very nná» á », na mbara ma ndá» ‹mpi isiokwu akpa okwu na gá» ‹blog aha. Onwere uzo onwere ike ichota nke di warara na obere ọdụ-ọdụ? Site na ịchọta isiokwu dị ogologo, ị nwere ike nweta okporo ụzọ dị mkpa ngwa ngwa site na ọchụchọ. Otu okwu dị otú ahụ bụ iji soshal midia na azumahia. Naanị ihe ọ na-achọta nyocha 30 kwa ọnwa, mana nke ahụ bụ ndị ọbịa ọhụrụ 30 na saịtị gị kwa ọnwa.
Na-aga ntakịrị n'ime njikọ njikọ. Enweela m n'eziokwu na arụghị ọrụ ndị a maka azụmaahịa ọ bụla na-ewepu bọtịnụ retweet nke Twitter (nke ị nwere) na Facebook dị ka bọtịnụ.
Njikọ nke gị kọntaktị page e liri gị menu igodo. Ozi kọntaktị dịka nọmba ekwentị, adreesị, ma ọ bụ ibe ịkpọtụrụ kọntaktị na ụdị kwesịrị ịdị mfe ịchọta na blọọgụ ọ bụla. Ndị mmadụ anaghị ewepụta oge iji megharịa saịtị ahụ… ma ọ bụrụ na ha ahụghị gị, ha apụ. M na-agba ụfọdụ ụlọ ọrụ achụmnta ego ahụ ka ha tinye ozi ahụ na isi na isi ọ bụla.
Ohere kachasị m hụrụ maka gị bụ iji blọọgụ gị kachasị na geographically iji dọta azụmaahịa ọhụrụ. Site n'ilekwasị anya na mpaghara gị ma guzoro dị ka onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'ebe ahụ, ịnwere ike iji ohere ị na-achọ na mpaghara ahụ site na azụmaahịa na-achọ enyemaka gị. Agbanyeghị, ị ga-ahụrịrị na ịnwe oku-na-arụ ọrụ na ọdịda peeji nke dị irè ka ha wee nwee ike jikọọ na gị!
Daalụ maka ohere iji nyochaa saịtị gị! Na ekele dị ukwuu maka nyochaa akwụkwọ anyị!
Tags: DynamicsEdwardsJDOracleUgboro abụọ
Sep 14, 2010 na 10:29 PM
Sep 14, 2010 na 10:45 PM
Daalụ Doug, ị nyela m ezigbo ụlọ ịsa ahụ m ga-arụ ọrụ na ya. Nke a bụ blog mbụ m megoro na nke ahụ abụghị ihe ngọpụ, mana ọ bụ ala nyocha m.
daalụ maka ezi uche gị
Sep 14, 2010 na 11:29 PM
Ebube inweta ndụmọdụ ndụmọdụ dị otú ahụ. Tozọ tinye onwe gị n’ebe ahụ n’ikpeazụ na-akawanye mma. M n'aka na m nwere ike tolite na-hip na jụụ ụfọdụ ụbọchị.
Sep 15, 2010 na 1: 18 AM
Nke ahụ dị egwu nke ịmeere ya Doug n'ihi na amaara m na ọ nwere ekele maka ya. Ekwenyere m nke ọma na ọtụtụ ihe ị na-ekwu ma nwee naanị "nitpicks" ole na ole.
Ugbu a nke a emetụtaghị na saịtị Dave n'ihi na ihe oyiyi ya abụghị nke ya mana maka ụfọdụ, ha bụ. Maka ndị ahụ ị chọghị ịgwa engines ọchụchọ ka ha ghara ileghara folda wp-ọdịnaya gị anya dị ka ndabara ihe ntinye na-abanye / wp-content / uploads / na saịtị dị ka nke nwunye m (ọ bụ onye omenkà, ma nwee ya ' Anọ m na-edebe ya ka m wee ghara ịkekọrịta n'ihi na ọ kpọrọ asị mgbe m mere) nweta ọtụtụ okporo ụzọ site na nyocha ihe oyiyi. N'akụkụ n'akụkụ, ejighị n'aka ma ọ bụrụ na nke a gbanwere na WP3 niile ma ọ bụ naanị na ejiri multisite rụọ ọrụ mana o yighị ka ọ na-eji wp-ọdịnaya ọzọ (naanị ntọala WP3 m bụ ọtụtụ na ọ bụghị 100%, ọ bụ ezie na nwelite ga-adị iche mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ha mere ndabara dị iche na nke ọhụrụ, ya mere ọ ga-adị mkpa iji nyochaa maka ndị onwe ha) mana ọ bụrụ na agbanwee mgbe ahụ nwere ike ime ka ọ ghara ileghara wp-
Ọzọ, um, ị hụla Dave? Nnọọ, ịchọrọ foto ya na nkụnye eji isi mee? You chere na ọ ga-ekwe omume iwere nke dị mma? Dave? Hehe, m na-ewu Daver. 😉
Onwe m na-akpọ m ihe ntụchi ndị na-apụta na weebụsaịtị, mana site na ihe m nwetara m dị n'ọnụ ọgụgụ. Otu ihe ọ bụ ezie na m na-ahọrọ mmanya na blọọgụ a karịa nke nke Dave. Na ala ọ bụ n'ụzọ na ọ na-egosi mgbe niile. Oge obula m nwere ihe gbaputara n’elu na-ekpuchi ọdịnaya echere m na ọ n’eme ihe n’ezie. Ikekwe ọ bụrụ na mmanya ahụ na-adị mgbe niile ọ ga-aka mma n'ihi na ị ga-agbanwegharị akwụkwọ mpịakọta ya na ya, mana na ala nke ibe ọ nwere ohere kachasị ịbanye. Ọ bụrụ na m gbadaa iji gụọ otu isiokwu achọghị m ka ị gbapụta mmanya na-egbochi m akara aka nke isiokwu ahụ, ma ọ bụ ihe ka njọ nke na-ekpuchi ọdịnaya niile. Agbanyeghị na ọ nweghị ihe mkpuchi ihe niile ma rịọ m ka m debanye aha ya na igbe nzipu ozi ya, ndị ahụ kachasị njọ. 🙂
Oke 3000 gị na-egbu m 😉
Ọ dị mma 2 isi ihe ndị ọzọ m tụlere Dave maka IM mana echere na m ga-ekekọrịta ebe a.
Nke mbụ bụ na amaara m na ndị mmadụ na-aga ma ụzọ abụọ. Achọghị m ịnwe ederede zuru oke na ihu ihu. Nke mbu ị ga - enweta ihu igwe ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa, mana ọ na - emekwa ka ị mata ihe mmadụ hụrụ dị mma iji mee ihe na pịa. Ọ bụrụ na ederede niile dị ebe ahụ, ha nwere ike ịgụ 1 na 4 nke 5 na-enweghị ịmara ya. Ọ na - emekwa ka ọ dịrị mmadụ mfe ịchọta otu isiokwu na - amasị ha na - enweghị ike ịpịgharịa peeji iji gaa isiokwu na - esote ) Ma m maara na ndị ọzọ na-eche na-abụghị na nke a na ọ bụ n'ezie a 50/50 onye pref ụdị ihe.
Nke abụọ abụrụ inwe ụdị ederede iji soro ihe ekwuru na vidiyo. Ruo mgbe Google na-aguta onu okwu site na vidiyo (ma gha ikwenye na nke a, wow my translations olu Google bu HORRIBLE) na itinye nchoputa ihe nchoputa ichoro ka i nwee isi ihe edere na ederede. Ọ bụ ezie na ederede ederede zuru oke ga-adị mma na amaara m na ha bụ ihe mgbu mana naanị ịnweta ndepụta mpụta isi ihe ndị bụ isi nwere ike inyere aka. Ederede dị ebe ahụ na-enyere aka mana echere m karịa ihe dị na vid ahụ nwere ike inyere aka.
Ndo maka ịtinye ogologo mbibi na 🙂 ọzọ kwa, ị na-eme nke a maka ya.
Sep 15, 2010 na 8: 00 AM
Naanị nke m ga-eme ka ndị mmadụ pịa maka isiokwu ahụ bụ Richard. Usoro a bụ n'ezie maka saịtị CPM (ọnụ ahịa kwa puku) ebe ndị mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ maka nyocha peeji. Ọ bụ ụzọ aka iji mee ka ibe ha nwekwuo ụba ka ha wee nwekwuo ego… na-efu ndị na-agụ ya.
Ahụbeghị m ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ na posts ndị na-ele mmadụ anya n'ihu na-eme ka ọtụtụ ndị ọzọ gaa na saịtị ma ọ bụ na-eme mgbanwe. Ruo mgbe m mere, Agaghị m eme ya. 😎
Sep 15, 2010 na 8: 02 AM
Ọ bụ nnukwu blog, Dave! Eleghara anya na ndepụta a dị oke egwu, ọ bụghị n'ụzọ ahụ. Ihe niile bụ nzaghachi na-ewuli elu kwesịrị inyere blog gị aka itolite ma nweta gị azụmaahịa!
Sep 15, 2010 na 8: 55 AM
Ekwesịrị m ikwenye gị na ịghara ilele ọkwa zuru oke na ibe akwụkwọ. Echiche m bụ:
1.) Ikwesiri inwe post gi kacha ewu ewu na ihu n’ihu gi n’ime akuku. Ndị a bụ akwụkwọ ego gị nke mepụtara ọtụtụ ego ma ọ bụ mkparịta ụka. Enwere ihe kpatara ya ji bụrụ ọkacha ewu ewu gị, ikekwe n'ihi na edere ya nke ọma ma nwee njikọ metụtara ọtụtụ ndị ọrụ. Ya mere, gịnị ma ị rata ha n’ihu gị n’agbanyeghị na ha nwere ike ịbụ otu ọnwa ma ọ bụ ọnwa abụọ. Donchọghị ka e lie ha na nri gị ma ọ bụrụ na ha nye gị ezigbo nloghachi.
2.) Ihe ndi ozo kwesiri ibu ihe ozo ohuru gi site na nri. Ndị mmadụ, IMO gaa n’ihu ihu maka echiche izugbe nke saịtị ahụ. I nwere 30 sekọnd ma ọ bụ ma eleghị anya obere iji mee ka uche ha dị. Yabụ inwe mkpịsị aka gị na snippets nke ndepụta gị ga-atụ anya ịdọrọ ndị na-agụ akwụkwọ na ihe. Ọ bụrụ n'inwe ozi zuru oke, mụ onwe m ma ọ bụrụ na enweghị m mmasị na isiokwu izizi gị zuru oke mgbe ahụ agaghị m aga n'ihu na saịtị ahụ. Mana ọ bụrụ na m nwere ike ịtụle isiokwu na ederede na nso nso a, enwere m ike ịhụkwu banyere saịtị ahụ ma yikarịrị ka ọ ga-abawanye.
Ọ bụ otu n'ime ndị nnukwu arụmụka ụdị isiokwu. Achọpụtara m na ọtụtụ ndị na-akpọ onwe ha "ndị ọkachamara" ma ọ bụ "pro" ndị na-ede blọgụ na-ahọrọ ọkwa zuru ezu na post ihu.
Ma na nzaghachi doug: Ahụbeghị m ihe ọ bụla na-egosi na oge na post zuru ezu na-eme ka ọtụtụ ndị ọzọ gaa na saịtị ma ọ bụ na-eme mgbanwe. Ruo mgbe m ga-eme, agaghị m eme ya. 😎
Sep 15, 2010 na 3:39 PM
Ekwenyere m na maka ụfọdụ ọ bụ ụdị mbipụta CPM. Maka m ọ bụ ezie na echere m na ọ na-enyere aka ịchọpụta ihe akụkọ ndị ọbịa na-agụ n'ezie ma e jiri ya tụnyere amaghị ma ọ bụrụ na ha lekọtara onwe ha ịgụ ma ọ bụ. Enweghi m ihe ọ bụla iji gbanwee onwe m ma ọ bụ naanị na m chọrọ ịma ma onye ahụ ọ na-echebara ya echiche iji gaa n'ihu ma ọ bụ n'ezie ma ọ bụrụ na ha achọghị ịma inweta karịa.
N'ezie kwesịrị nnọọ ime ka ọ a JS "mụbaa" ụdị Mbido ya mere ha ga-esi na peeji ahụ, na-ahụ naanị ntakịrị iji kpebie ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, mana mgbe ahụ ka ị ga-enweta ederede zuru ezu ebe ahụ ma ana m enweta data m chọrọ. Nke ahụ nwere ike ịdị mfe / nchịkọta kacha mma maka ihe m chọrọ.
Egwu post! Na-akpali nnọọ mmasị na ihe ọmụma.